कस्तो छ ‘कृ’को व्यापार ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
कस्तो छ ‘कृ’को व्यापार ?
२९ माघ २०७४, सोमबार १३:२३ 104
शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘कृ’ले शुरुवाती दुई दिनमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार ६ सय ८ रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । शुक्रबार सिनेमाले सोचेजस्तो कारोबार गर्न नसकेपछि शनिबार भने सिनेमाको कारोबार आक्रामक नै थियो । बिदाको दिन परेका कारण शुक्रबारको तुलनामा सिनेमाको शनिबारको कारोबार दोब्बर रह्यो ।
‘कृ’सँगै सम्बन्धित पत्रकार अनुप भट्टराईका अनुसार सिनेमाले शुक्रबार मोफसलमा ३५ लाख ८६ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ र उपत्यकामा ६१ लख १३ हजार ५ सय ६३ रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । शनिबार भने सिनेमाले उपत्यका बाहिर ६३ लाख ५६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ र उपत्यकामा १ करोड ४ लाख ९६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।
यस हिसाबले सिनेमाले दुई दिनमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार ६ सय ८ रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । सिनेमाको आईतबारको कलेक्शन भने बाहिरिएको छैन । ३ करोड ५० लाखमा निर्माण भएको ‘कृ’ले लगानी उठाउन अझै ३ करोड ४० लाखको कारोबार गर्न आवश्यक छ ।
विशेष शोमा ‘कृ’को प्रशंसा
आईतबार कुमारी हलमा सिनेमाको विशेष शो राखिएको थियो । सिनेमा शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको भएपनि प्रिमियर गर्न नभ्याएपछि निर्माण पक्षले आईतबार विशेष शो राखेको हो । ‘कृ’ विशेष शोमा चर्चित सिनेकर्मीहरु र पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उपस्थित प्राय सिनेकर्मीले सिनेमाको मेकिङ, एक्शन र प्राविधिक पाटोलाई खुलेर प्रशंसा गरे । उता अनमोल र अदितीको कामको पनि कार्यक्रममा खुबै तारिफ भयो ।
सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशन रहेको यस सिनेमालाई भुवन केसी र सुवास गिरीले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । सिनेमामा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाकंन रहेको छ भने अनमोल केसी, अदिती बुढाथोकी, अनुप विक्रम शाही, कामेशवर चौरासिया, सरोज खनाल, लक्ष्मी गिरी, रुपा राना लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
मुक्तककार रश्मिले हल्लाइन् पोखरा
’शत्रु गते’को टिजर हलमा